Onye isi ochichi ohuru na Westin Langkawi Resort & Spa Malaysia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » culinary » Onye isi ochichi ohuru na Westin Langkawi Resort & Spa Malaysia
Na-agbasa News Travel • culinary • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa Malaysia • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ọbịa na-eri nri na Westin Langkawi Resort & SpaMbinye aka iri nri nke ọma, yana ọtụtụ nri ndị obodo na nke ụwa, dị maka ahụike, ahụmịhe nri na-edozi ahụ na nhọpụta nke Glen Roberts dị ka onye isi oche 5-star's Executive Chef.
Isi okwu Glen ga-abụ ilekọta na ịkwalite mmemme iri nri nke ọma na Westin Langkawi, nke na-enye ndị ọbịa nri na-edozi ahụ nke e mepụtara n'ụzọ ezi uche dị na ya ma kee ya n'echiche. Mmemme a, nke enyere na Westin Hotels & Resorts n’uwa niile, na-elekwasị anya n’ị nabata ụdị nri na mkpa onye ọ bụla n’enweghị mmetụ, ụtọ ma ọ bụ afọ ojuju.
"Eat Well program bụ atụmatụ pụrụ iche dabere na nkwenye na inwe mmetụta dị mma na-amalite site na nri kwesịrị ekwesị," ka Glen kwuru. "Ọ bụ ihe nsọpụrụ ị so na otu ndị otu kpakpando nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ mbụ na-enweghị ihe ọmụma, ọ na-agụkwa m agụụ inweta nghọta obodo na ịgbanwee ihe ọmụma banyere otu kacha mma iji nye ndị ọbịa echiche na-edozi ahụ ma na-adọrọ mmasị."
N'akụkụ ndị otu ya site na Westin Langkawi, onye na-ahụ maka nri na-agagharị ebe niile ga-ahụ maka ịkwalite onyinye nri na Langkawi International Convention Center (LICC), nke kachasị na agwaetiti a.
Glen bịarutere Langkawi mgbe ọ gbasịrị na 5-kpakpando Emerald Palace Kempinski Dubai, ebe ọ bụ akụkụ nke ndị otu mmeghe. Tupu ọ na-agba afa na United Arab Emirates, ọ nọrọ afọ abụọ, site na 2016, dị ka onye isi Executive na Shangri-La na Surabaya. Otú ọ dị, ihe ndị o ji esi nri ya malitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 5,000 na 40 afọ gara aga na Australia.
Ọ malitere mmekọrịta ịhụnanya ya na nri n'Australia n'etiti 1980s tupu ọ kwado ọrụ nkà ya na London na New Zealand. Glen laghachiri Brisbane ma nwee ọganihu wee bụrụ onye nke abụọ na-elekọta Executive Chef nke Hyatt Regency Coolum na Queensland, na-elekọta nlekọta nri nri 10 na ọtụtụ ebe a na-eri oriri. O mechara kwaga Park Hyatt dị na Canberra, ebe ọrụ ya dị ka Onye isi Ala Sous Chef hụrụ ya ka ọ na-aga HRH Queen Elizabeth na Prince Edward, Earl nke Wessex mgbe ha gara ebe ahụ na 2002.
N'ịchọ ọhụụ ọhụrụ, Glen so n'òtù ndị malitere Grand Hyatt Dubai. Mgbe ahụ, ọ na-elekwasị anya na Sheraton Grand Laguna Phuket na Thailand, bụ ebe ọ na-eme ememe mbụ ya dị ka Executive Chef na 2003. Afọ abụọ mgbe e mesịrị, ọ chọtara onwe ya na East Malaysia na Shangri-La Rasa Ria Resort. Ebe otu n'ime ọtụtụ ihe pụtara ìhè bụ ka ọ bụrụ isi ihe na-akpata mmepụta nke "Akwụkwọ ụtọ nke Borneo" akwụkwọ nri, nke lekwasịrị anya na ịkwadebe nri 5-star na-eji ngwaahịa sitere na Sabah.
Na 2010, Glen bụ akụkụ dị mkpa nke otu egwuregwu na-emezigharị ihe ịga nke ọma na imeghe Shangri-La Rasa Sentosa Resort na Singapore. Ọ gara n'ihu na-ebute ụzọ maka ebe ezumike ruo 2013, mgbe ọ kwagara na Shangri-La Fijian Resort na Spa dị ka Onyeisi Nchịkwa ha.
N'ịchọsi ike ịlaghachi na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ọ gawara Thailand's InterContinental Hua Hin Resort na 2015. Glen tinyere aka n'ịmepe na imeghe ụlọ mmanya Roof Top na BluPort Wing, nke nwere ọnụ ụlọ ndị ọbịa 40, iri nri ụbọchị niile. ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ụlọ nzukọ na ebe a na-egwu egwu.
"Ihe oriri bụ agụụ m, agbagharala m ọmarịcha mpaghara a," ka Glen na-achị ọchị. "Site na ijikọta ha abụọ, enwere m olile anya ime ka ndị ọbịa nọ na Westin Langkawi were ụfọdụ nri ahụike, nke kachasị ụtọ na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia ma na-ejigide ụkpụrụ ije ozi, ogo na ile ọbịa."
N'ịbụ nke dị na 104 acres nke lush, Langkawi ubi na-ekpo ọkụ nke dị n'akụkụ Oké Osimiri Andaman, Westin Langkawi Resort & Spa gụnyere 221 sara mbara, ụlọ a họpụtara ahọpụta na oke. Ebe a na - egosiputa ebe obibi nke ihe nlere anya nke oma nke 20 nke Ocean View Pool nke juputara na ọdọ mmiri nke onwe ya yana ndi mmeri nke Heavenin, nke bu Westin Spa na Malaysia.
Maka ama ndi ozo banyere Westin Langkawi Resort & Spa, gaa na
www.westinlangkawi.com ma ọ bụ soro anyị na Twitter, Instagram na Facebook.
Nnukwu Mgbakọ Miami na ndị ọbịa ...
Ime ihe ike na-eme ihe ike na Paris na iwu mkpuchi ...